Jobily faha-100 taona : hiitatra ny seha-piharian’ny Cem · Aponga
Jobily faha-100 taona : hiitatra ny seha-piharian’ny Cem
Notokanana, ny zoma 15 desambra teo, ny birao vaovao, masoivohon’ny Caisse d’epargne de Madagascar (Cem) any Antsirabe. Tafiditra ao anatin’ny fahatsiarovana hanamarihina ny faha-100 taon’ny Cem ity fotodrafitrasa goavana ity.
Hivoatra koa ny seha-pihariany eo amin’ny tontolon’ny vola, ankoatra ny famantarana azy amin’ny fitahirizam-bola sahaza ny rehetra. Nilaza ny tale jeneraliny, Rajerison Dominique, fa zava-dehibe amin’ny Cem ny hitondra ny anjara birikiny hampandrosoana ny tontolo ara-bola eto amintsika, ka ilaina ny hametrahana lasitra mifanaraka amin’izany eo amin’ny lafiny lalàna hanitarana ny seha-pihariana. Raha tanteraka ireo, afaka miditra an-tsehatra ny Cem, ka anisan’izany ny fahafahana mamatsy vola fandaharanasa na tetikasa. Manodidina ny 1,2 tapitrisa ny mpanjifan’ny Cem manerana ny Nosy, ahitana masoivoho miisa 30.
Kely ny fitahirizam-bola miohatra amin’ny PIB
Nilaza ny minisitry ny Tetibola sy ny vola, Rtoa Andriambololona Vonintsalama, fa zava-dehibe ho an’ny toekaren’ny firenena iray ny fisian’ny fitahirizam-bola matanjaka. Kely anefa izany eto Madagasikara, satria mbola vao ny 11,9%-n’ny harinkarena faobe (PIB) eto Madagasikara ihany. Izay ny mahatonga ny fanjakana hametraka fehezan-dalàna tsara kokoa hanatsarana ny tontolo ara-bola eto amintsika.
Tsiahivina fa vao nankatoavin’ny antenimieran-doholona nandritra ny fivoriambeny farany teo, ny lalàna vaovao mifehy ny vola eto Madagasikara. Anisan’izany ny mikasika ny fanaraha-maso ny orinasam-bola, ny asa sy ny fanaraha-maso ny birao fifanakalozam-baovao mikasika ny vola (BIC), sns.
Orange Madagascar : Andranofeno illiminé